खानेकुरामा गरिने यी लापर्बाहीले तपाईंलाई हुन सक्छ मधुमेह, यसरी जोगिनुहोस् – सजल सन्देश
खानेकुरामा गरिने यी लापर्बाहीले तपाईंलाई हुन सक्छ मधुमेह, यसरी जोगिनुहोस्
By Sajal sandesh	 On२८ आश्विन २०७८, बिहीबार ०१:३४
जमघट, घुमघाम र खानपान दसैँका खास विशेषता हुन् । तर, दसैँका यी तीनवटै विशेषतामा निर्धक्क भएर रमाउने परिस्थिति अहिले छैन । एकातिर काेराेना छ, जमघट र घुमघामबाट यसले गाँज्न सक्छ । अर्कातिर मधुमेहजस्ता राेग छन्, अनियमित र असन्तुलित खानाबाट शरीरमा पस्न सक्छन् । मधुमेह लाग्याे भने अरु राेगहरूले सजिलै शरीरमा डेरा जमाउन सक्छन् ।
संसारभरका ४५ करोडभन्दा बढी मानिस मधुमेहबाट पीडित रहेकाे विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे तथ्याङ्कले देखाउँछ । यीमध्ये १० प्रतिशत बिरामी उच्च जोखिमका छन् । सन् २०१९ मा करिब १५ लाख मानिसले मधुमेहकै कारण ज्यान गुमाएका थिए ।
संसारमा सबैभन्दा बढी भारत र चीनमा मधुमेहका रोगी छन् । असन्तुलित खानपानका कारण नेपालीहरू पनि मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेकाे चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिँदै आएकाे छ । देश विकास हुँदै जाँदा नागरिकहरू पनि विलासी बन्दै जान्छन् । खानपानकाे सन्तुलनमा समेत ध्यान दिँदैनन् । यसाे हुँदा मान्छेकाे शरीरमा मधुमेहले ठाउँ बनाउँछ । रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरूकाे क्रय क्षमता विगतकाे तुलनामा धेरै बढेकाे छ । सँगै असन्तुलित रहनसहन, खानपानले समस्या पनि निम्त्याइरहेकाे छ । नेपालमा मधुमेहका रोगीहरू बढिरहेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् ।
के हाे मधुमेह ?
मधुमेहलाई सुस्त मृत्यु पनि भनिन्छ । याे यस्ताे रोग हाे, जसले कसैकाे शरीरमा एकपल्ट ठाउँ बनायाे भने जीवनभर यसबाट पार पाउन मुस्किल छ । याे रोगकाे अर्काे डरलाग्दाे पक्ष भनेकाे शरीरमा पसेपछि यसले अरू राेगलाई समेत निम्ता दिन्छ ।
मधुमेह बिरामीकाे आँखा, मिर्गाैला र कलेजाेमा समस्या हुनु आम हाे । पहिलेपहिले त याे बिमार चालीस कटेपछि मात्र हुन्थ्याे । तर, हिजाेआज बच्चाहरूलाई समेत यसले गाँज्नु चाैतर्फी चिन्ताकाे विषय बनेकाे छ ।
जब हाम्राे शरीरकाे पाचनथैली (प्याङ्क्रियाज) मा इन्सुलिन कम पुग्छ, तब रगतमा ग्लुकोजकाे स्तर बढ्छ । यस्ताे स्थितिलाई मधुमेह भनिन्छ । इन्सुलिन एक हार्मोन हाे, जुन पाचक ग्रन्थीद्वारा बन्छ । यसकाे काम शरीरभित्र जाने भोजनलाई इनर्जीमा बदल्नु हाे । शरीरमा सुगरकाे मात्रा नियन्त्रण गर्ने हर्माेन पनि यसैमा हुन्छ । मधुमेह भएपछि भाेजनबाट इनर्जी बनाउन शरीरलाई मुस्किल पर्छ । यस्ताे स्थितिमा ग्लुकोजकाे बढेकाे स्तरले शरीरका विभिन्न अङ्गलाई हानि पुर्‍याउन थाल्छ ।
याे राेग महिलाकाे तुलनामा पुरुषहरूमा ज्यादा हुन्छ । मधुमेह प्राय:जसाे वंशाणुगत र असन्तुलित जीवनशैलीका कारण हुन्छ । वंशाणुगतलाई टाइप- वान र अनियमित जीवनशैलीका कारणले हुने मधुमेहलाई टाइप- टु गरी दुई श्रेणीमा राखिन्छ ।
– बढी तिर्खा लाग्नु
– बारम्बार पिसाब लाग्नु
– आँखाकाे ज्याेति कम हुनु
– कुनै पनि चोट ढिलाे निकाे हुनु
– हात, खुट्टा र गुप्ताङ्ग चिलाउने, दुख्ने ।
मधुमेहबाट जाेगिन के गर्ने, के नगर्ने ? विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले दिएका सुझाव यस्ता छन्:
– तपाईं आफ्नाे शरीरकाे ग्लुकोजको स्तरलाई जाँच्नुहाेस् । खानुअघि याे सय र खाएपछि १ सय २५ भन्दा बढी देखियाे भने सतर्क हुनुहाेस् । हरेक तीन महिनामा HbA1c परीक्षण गराउँदै गर्नुहाेस्, ताकि तपाईंलाई आफ्नाे शरीरमा सुगरकाे वास्तविक मात्रा थाहा हाेस् । त्यहीअनुसार तपाईं डाक्टरसित परामर्श लिएर औषधि लिन सक्नुहुन्छ ।
– आफ्नाे अनियमित जीवनशैली बदल्नुहाेस् । र, शारीरिक श्रम गर्न थाल्नुहाेस् । जिम जान चाहनुहुन्न भने दिनमा तीनदेखि चार किलोमिटरसम्म पैदल हिँड्नुहाेस् वा याेगा गर्नुहाेस् ।
– कम क्यालाेरी हुने भोजन खानुहाेस् । गुलियाे खानेकुरामा बल नगर्नुहाेस् । हरियाे सागसब्जी, ताजा फलफूल, स्वस्थकर अन्न, डेयरी उत्पादन र ओमेगा-३ फ्याटका स्रोतहरू आफ्नाे भोजनमा मिलाउनुहाेस् । यसबाहेक फाइबरयुक्त खानेकुरा पनि खानुपर्छ ।
– दिनमा तीनपल्ट खानुकाे साटाे त्यति नै खानेकुरालाई छ/सात पल्टमा खानुहाेस् ।
– धूमपान र रक्सी खाने बानी छ भने यसलाई कम गर्नुहाेस् वा चटक्कै छाेडिदिनुहाेस् ।
– अफिसकाे कामलाई लिएर धेरै टेन्सन नलिनुहाेस् । अनि राति पर्याप्त सुत्नुहाेस् । निन्द्रा नपुग्नु स्वास्थ्यका लागि राम्राे हाेइन । तनावलाई कम गर्नका लागि तपाईं ध्यान गर्नुहाेस् वा संगीत आदि सुन्नुहाेस् ।
– नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै गर्नुहाेस् । सुगर लेभलकाे दैनिक रेखदेख गर्दै गर्नुहाेस् । एकपल्ट सुगर बढ्याे भने त्यसकाे स्तर तल झार्न निकै कठिन हुन्छ । यस क्रममा बढेकाे सुगर लेभलले शरीरका अंगमा नराम्राे असर पार्न सक्छ ।
– गहुँ र जाै २-२ किलाेकाे मात्रामा राखी एक किलाे चना मिसाएर पिस्नुहाेस् । त्याे आँटाबाट बनेका चपातीहरू भोजनका रूपमा खानुहाेस् ।
– मधुमेहका रोगीहरूले खानामा करेला, मेथी, सज्जियन (सहजन, मुन्गा), पालक, घिराैँँला, सलगम, बैगुन, परवल, लौका, मूला, फूलकाेभी, ब्राेकाउली, टमाटर, बन्दा काेभी र पातयुक्त तरकारीहरू खानु राम्राे हुन्छ ।
-फलहरूमा जामुन, कागती, अमला, टमाटर, मेवा, खरबुजा, काँचाे अम्बक, सुन्तला, मौसम, जाइफल, नासपाती खानु उत्तम हाे । आँप, केरा, स्याउ, खजुर तथा अङ्गुर खान हुँदैन । किनकि, यी फलमा सुगर धेरै हुन्छ ।
– मेथी दाना राति भिजाउनुहाेस् । अनि बिहानबिहान खाली पेटमा खानुहाेस् ।
– खानामा बदाम, लसुन, प्याज, टुसाएका दालहरू, टुसाएकाे चना, सातु र काेदाे आदि मिलाउनुहाेस् । आलु, चामल र मक्खन निकै कम खाने गर्नुहाेस् ।
मधुमेहका रोगीलाई चिनी र चिल्लो बोसोयुक्त प्रशोधित खानेकुरा, चिनी, सक्खर, जुस, जाम, मह, चकलेट, मिठाई, गुलियो पेयपदार्थ, हर्लिक्स, खुवा, चाकु, केक, आइसक्रिम, बिस्कुट, घ्यू, नौनी, बोसो, तारेको वा भुटेको खाना नखान पाेषणविद् डा. अरुणा उप्रेती सुझाउँछिन् ।
यस्तै चुरोट, बिँडी, सुर्ती, तमाखु, खैनी, जर्दा आदि सुर्तीजन्य र बियर, रक्सीजस्ता मदिराजन्य पदार्थ सेवन नगर्न, लामो समयसम्म भोकै नबस्न उनकाे सल्लाह छ ।
फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाहद्वारा नेपाल छाड्ने घोषणा
कब्जियतबाट बच्ने ६ टिप्स
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा ‘फ्री फ्लाप रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी’ सेवा सुरु
के कोभिड भ्याक्सिन अब चक्कीमा लिन पाइएला ?
अनावश्यक भार हल्का भएपछि उत्साहित छन् सुवास
जनगणनामा खटिएका तीन जनाको मृत्यु, चार जनालाई कुकुरले टोक्यो
२७० मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, दुईको मृत्यु
सवारी दुर्घटनामा चार महिनामा १२ को मृत्यु
विवादित छवि बनाएर सरुवा भए गौरादह प्रहरी प्रमुख !
गौरादहका मबेसिर हुसेन मियाँको हत्या आरोपमा ५ जना पक्राउ